नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले आजबाट सुरु गरे दाल चामल वितरण । | Mulbasi News
नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले आजबाट सुरु गरे दाल चामल वितरण ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले आज बाट वडा वडामा गएर सर्व साधारणलाइ दाल चामल बाड्ने निर्णय गरे अनुसार वितरण सुरु गरिएको छ ।
वडा कार्यलयको अलिक फितलो ब्यबस्थापनले गर्दा सामाजिक दुरी कायम राख्न केहि बेर हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ ! तर पनि भोलि हुने बितरणमा यसबाट पाठ सिक्दै सामाजिक दुरी राख्ने कोसिस् सम्बन्धित वडा कार्यलयबाट गरियोस् ! दैनिक ज्यालादारी मजदुर परिवार तथा आबस्यकले खाद्यान्न अभाब छ भने वडा प्रमुखलाई सम्पर्क गर्नुहोला तथा गराईदिनुहोला ! रोग र भोक संग संगै लडम भन्दै इटहरी नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले मूलवासी न्युज लाइ जानकारी दिनु भयो ।
कोरना भाइरस को माहामारीमा खटिने सम्पूर्ण इटहरी नगर बासि सहयोगी साथिहरुमा पनि धन्यबात ज्ञापन गर्नु भयो ।